जगदिश्वर नरसिंह केसी, सभापति –नेपाली कांग्रेस (नुवाकोट)
नेपाली कांग्रेसका नेता, कार्यकर्तालाई यतिखेर १३ औं महाधिवेशनको चटारो छ । सबै नेता, कार्यकर्ता यतिखेर गाँउ पसेका छन् । त्यस्तै नुवाकोट जिल्लामा पनि महाधिवेशनको रौनक छाएको छ । यतिबेला नुवाकोट जिल्लाको अधिवेशन भव्य र सभ्य रुपमा सम्पन्न पार्न अहोरात्र खटिएका छन् नुवाकोट जिल्लाका कांग्रेस सभापति जगदिश्वर नरसिंह केसी । विगतमा तीन कार्यकाल जिल्ला सभापतिको नेतृत्व सम्हाली सकेका उनै केसीलाई पुन नेतृत्वका लागि चर्को दवाव आइरहेको छ । सक्षम, सवल, जनता र विकास प्रेमी नुवाकोट जिल्लामै धेरै रुचाइएका नेता केसीसँग जिल्ला अधिवेशन तयारी, नयाँ नेतृत्व चयन तथा नुवाकोट कांग्रेसको आगामी योजना र विगतका कामका विषयमा गरिएको पाँच प्रश्न ।
कांग्रेस १३ औं महाधिवेशनको सन्देश के हो ?
यो महाधिवेशनले केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्मको नेतृत्व परिवर्तमा मात्र होइन । नेपाली कांग्रेसको आगामी गति र दिशा, हामीले लिने निति निर्धारण गर्ने छ । त्यही नीतिका आधारमा पार्टीका केन्द्र देखि गाविस सम्मका कामहरु अगाडि बढ्ने छन् । जसबाट आगामी ५ वर्ष कांग्रेसले मुलुकलाई कसरी डोर्‍याउछ र जनताका पक्षमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुरा सार्वजानकि पनि गर्छ ।
नुवाकोट जिल्ला सभापतिमा फेरी तपाइले उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्नु भएको हो ?
मैले अहिलेसम्म तीन पटक जिल्ला सभापतिको नेतृत्व सम्हालि सकेको छु । त्यसकारण यसपटक मेरो इच्छा फेरी आफै उम्मेदवार बन्ने भन्दा पनि अरुलाई बनाउने हो । म यो गृहकार्यमा लागिरहदा मलाई नै निरन्तता दिन चर्को दबावहरु आइरहेका छन् । म जिल्ला कार्यसमितिमा बिभिन्न तहमा रहेर तीस वर्ष काम गरे अब मेरो इच्छा केन्द्रिय समितिमा जाने हो र म त्यही गृहकार्यमा लागि रहेको छु । मैले फेरी भने मेरो भित्री इच्छा अब कांग्रेस नुवाकोट जिल्लाको नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने हो ।
यसो भनेर तपाईले सहमतिको सभापति बन्ने मौका त खोज्नु भएको होइन् ?
सर्वसम्मत भए पनि मैले इच्छा गरेको छैन् । जसरी पनि नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पने मेरो इच्छा हो । त्यसकारण अब म नुवाकोट सभापति भन्दा केन्द्रिय समितिमा रहेर देश र जनताको पक्षमा काम गर्न चाहन्छु । मेरो यो भावनालाई नुवाकोटका मेरा शुभेच्छुकहरुले बुझ्ने छन् । त्यहाँ सम्म पुर्‍याउने छन् भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
तीन पटक सभापति हुदाँ गरेका कामलाई कसरी स्मरण गर्नु हुन्छ ?
मैले यो अवधिमा धेरै कामहरु गरेको छु । धेरै ठुला ठुला कार्यक्रमहरु जिल्लामा संचालन गरेको छु । कांग्रेसको संगठन शुन्य भएका स्थानमा अहिले शसत्त रपमा अगाडि बढाएको छु । ७० सालकै निर्वाचनलाई पनि हेर्ने हो भने तीन वटै क्षेत्रमा कांग्रेसले जितेको छ । यो हामी सबै नुवाकोट कांग्रेसको लागि ठुलो उपलब्धि हो । मेरो यो तीन वर्षे कार्यकाल नुवाकोटमा कांग्रेसको संगठन विस्तार र विकासका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रह्यो । जसमा जिल्लाका सम्पूर्ण साथीहरुको ठुलो साथ र सहयोग गरेको कुरालाई म भूल्न सक्दिन् । त्यसकारण सम्पूर्ण नुवाकोटवासीलाई म धन्यवाद सहित अझ सशक्त सहयोगको लागि आग्रह गर्छु ।
यो महाधिवेशनले नुवाकोट कांग्रेसको विवादलाई समाप्त पार्छ ?
हेर्नुस, महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा नेतृत्वका लागि अगाडि आउदैमा हामीले त्यसलाई विवाद भयो भनेर भन्नु भएन । प्रतिस्प्रर्धाबाट नेतृत्व चयन हुनु स्वभाविक कुरा हो । यस अघि कतिपय गाविसमा सर्वसम्मत भएका छन कतिपयमा निर्वाचनबाट चुनिएका छन् । यसरी प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले अगाडि बढ्नु विवाद होइन । हामी अहिले पनि एक छौं र महाधिवेशन पछि पनि एक नै रहेर नुवाकोट जिल्लाको विकासमा लाग्छौ ।